Ahoana ny fianarana any Gresy? – ALinks
Raha te hianatra any Gresy ianao dia mila ny taratasy fanamarinana sekoly ambaratonga faharoa. Afaka misafidy ny oniversite tianao ianao. Mety ho voafetra ny safidy azonao. Raha tsy olom-pirenena EU ianao dia mety mila visa ho an'ny mpianatra. Mangataka visa ho an'ny mpianatra miaraka amin'ny oniversite misy anao ianao.
Firenena miavaka i Gresy, antsoina matetika hoe Hellas. Raha ny marina, dia sivilizasiona tranainy iray izy io. Any atsimo-atsinanan'i Eoropa no misy an'i Gresy, eo amin'ny sampanan'i Eoropa, Azia ary Afrika. Gresy dia iray amin'ireo toerana fianarana tsara indrindra any ivelany eran'izao tontolo izao, miaraka amin'ny toetr'andro mafana sy ny mari-pana Mediteraneana, ny tontolo mahagaga ary ny tantara ara-kolontsaina manankarena. Raha mianatra any ivelany any Gresy ianao, dia ho hitanao fa mihoatra lavitra noho ny toerana fizahan-tany.
Ny fianarana any amin'ny oniversite grika dia mety ho safidy manintona loatra ho an'ny mpianatra vahiny. Ny dia mankany amin'ity firenena mahavariana ity dia ahafahan'ny mpianatra manondrika ny tenany amin'ny toe-kolontsaina sy tantara ara-kolontsaina, miaraka amin'ny rivo-piainana manankarena. Gresy dia fantatra koa ho iray amin'ireo firenena mora indrindra any Eropa. Any Gresy, ny oniversite dia tsy manefa saram-pianarana amin'ny saram-pianaran'ireo mpianatra ambany sarimihetsika. Raha te-ho tafiditra ao anatin'ity fombafomba akademika ity ianao amin'ny maha mpianatra iraisam-pirenena anao. Fotoana izao hahazoana fampahalalana vitsivitsy momba ny fomba hianarana any amin'ny oniversite any Gresy.
Fepetra takiana ho an'ny bakalorea
taratasy fanamarinana sekoly ambaratonga faharoa manankery
farafahakeliny 10 GPA amin'ny ambaratonga 10 ka hatramin'ny 20
Taratasy fanamarinana anglisy
Taratasy teny grika ho an'ny Bachelors rehetra
Fepetra takiana amin'ny tompona Master
mari-pahaizana Bachelor ekena
2-5 taona traikefa amin'ny asa
Ny fanamarinana ny teny anglisy (C1 Advanced, TOEFL, IELTS) miaraka amin'ny isa bitany farafahakeliny B na 7 amin'ny ambaratonga 1.0 mankany 9.0
Salan'ny GMAT farafahakeliny 500 (mihatra amin'ny MBA ihany)
Farafaharatsiny 7, GPA 5 amin'ny ambaratonga 1 ka hatramin'ny 10
Ny fizotran'ny fampiharana amin'ny oniversite grika ho an'ny fianarahan'ny bakalorea
Ny fizotry ny fangatahana dia miovaova arakaraka ny mari-pahaizana apetrakao. Raha te hangataka mari-pahaizana licence ianao dia tsy maintsy mametraka ny antontan-taratasinao. Azonao atao ny mampiasa ny sehatra fidirana nasionaly tantanin'ny Ministeran'ny Hellenic. Miandraikitra ny Fanabeazam-pirenena sy ny Raharaha ara-pivavahana.
Aorian'izany dia mila mandefa ny antontan-taratasy any amin'ny manampahefana mitovy amin'izany ihany koa ianao. Ny antontan-taratasy fampiharana dia mitovitovy tanteraka.
Fotokopia amin'ny taratasy fanamarinana ny fitoviana amin'ny mari-pahaizana diplaoman'ny kandidà. Mila avoakan'ny manampahefana grika ao amin'ny firenenao izany.
Rakitsoratra misy ny GPA anao
dika mitovy amin'ny taratasy fanamarinana diplaoma misy fandikan-teny grika ofisialy
Porofon'ny fahaizana fiteny (anglisy, grika, sns)
Ny fe-potoana hangatahana ny mari-pahaizana bakalorea any Gresy dia matetika amin'ny volana Jolay. Hahazo fampandrenesana anao momba ny valiny ianao amin'ny alàlan'ny fanambarana amin'ny tranokala.
Rehefa nahazo ekipa tany amin'ny oniversite grika ianao
Na programa Bachelor's na Master ianao dia nekena tamin'ny oniversite grika. Raha avy any ivelan'ny EU/EEA ianao dia mila visa ho an'ny mpianatra.
Tsarovy ihany koa fa raha manao licence ianao nefa tsy mahay teny grika. Avy eo dia mila mandany taona fiomanana hianarana ilay fiteny ianao. Mila atao izany vao afaka misoratra anarana eny amin'ny oniversite.
Rehefa voaray ny taratasinao fanekena dia ho fantatrao ny dingana manaraka amin'ny fisoratana anarana amin'ny oniversite grika. Ny sara tsy maintsy aloanao (raha mpianatra ivelan'ny Vondrona Eoropeana ianao). Ireto misy tarehimarika tena ilaina mba hanomezana anao hevitra momba ny sandan'ny fianaranao any Gresy:
2,000-4,000 EUR / taona no saram-pianarana any amin'ny oniversite grika ho an'ireo mpianatra tsy EU:
Vidim-piainana any Gresy isaky ny mpianatra: 450-800 EUR / volana.
Izany rehetra izany dia momba ny fomba fianarana any amin'ny oniversite any Gresy.
Ohatrinona ny fianarana any Gresy?
Ho an'ny fianarana ambaratonga faharoa, ny sarany dia miankina amin'ny zavatra maromaro. Ny mpianatra iraisam-pirenena tsy Eoropeana rehetra dia andrasana handoa € 1500 isan-taona. Ireo sara ireo dia ahitana boky fampianarana ihany koa. Ny saran'ny mari-pahaizana maîtrise amin'ny oniversitem-panjakana dia manomboka amin'ny €1500 ka hatramin'ny €2000. Izany dia azo ampiharina isaky ny taom-pianarana/semestera. Any Gresy, tantara hafa mihitsy ny sekoly tsy miankina.
Ny fianarana any amin'ny oniversite tsy miankina na kolejy dia lafo kokoa. Na Eoropeana na tsy Eoropeana, miaraka amin'ny sarany isan-taona mahatratra €10,000 na mihoatra. Raha mila fanazavana fanampiny dia tsidiho ny tranokalan'ny oniversite eritreretinao.
Iray amin'ireo antony manery indrindra hianarana any ivelany any Gresy ny vidim-piainana tsy lafo. Ny mpianatra avy amin'ny EU, EEA, ary Soisa dia tsy mandoa saram-pianarana. Any amin'ny oniversitem-panjakana grika ho an'ny mari-pahaizana bakalorea, ary maro amin'ireo programa maîtrise no maimaim-poana ihany koa ho an'ity vondrona ity.
Maimaimpoana ve ny fianarana any Gresy?
Tsy mandoa saram-pianarana ny mpianatra satria maimaim-poana ny fampianarana any Gresy. Ny mponina grika rehetra (ary koa ny vahiny sasany mipetraka sy miasa ao amin'ny firenena) dia manan-jo hahazo fampianarana maimaim-poana. Voarakitra ao anatin’ny lalàm-panorenan’ny firenena ihany koa izany.
Ilaina ny fanadinana amin'ny fidirana eny amin'ny oniversite, ary mamitaka fampianarana ho an'ny daholobe maimaim-poana io fomba fiasa io. Na dia eo aza ny hoe natao maimaimpoana ho an'ny mpianatra rehetra, manankarena sy mahantra ny fampianarana any an-tsekoly. Maro ny ray aman-dreny tia mandefa ny zanany any amin'ny sekoly tsy miankina izay mitaky saram-pianarana. Sampan-draharaha tsy miankina no mitantana ireo sekoly tsy miankina ireo na dia saika mitovy amin’ny sekoly hafa aza ny fandaharam-pianaran’izy ireo
Te-mianatra any Etazonia ve ianao? Milady eto !!
Maniry hianatra any Sina ve? Makà !!
Ahoana ny fomba hianarana any Aostralia
Janoary 10, 2022